Kọmpat ọka Mill
CTCM-usoro kọmpat ọka Mill, nwere ike na-egweri ọka / ọka, sorghum, soybean, ọka wit na ihe ndị ọzọ. Nke a CTCM-usoro kọmpat ọka Mill adopts ifufe ike ebuli, mpịakọta egweri, na ijikọta na sifting ọnụ, si otú ahụ nweta ikike nke elu arụpụtaghị, ọma ntụ ntụ eweli, ọ dịghị efe uzuzu, ala ike oriri, mfe mmezi na ndị ọzọ na ezi ọrụ
Nnukwu ikike ọka wit
A na-etinye igwe ndị a na ụlọ ndị siri ike ma ọ bụ osisi ndị e ji ígwè rụọ, bụ nke dị n'ogo 5 ruo 6 dị elu (gụnyere ọka wheat, ụlọ nchekwa ntụ ọka, na ụlọ na-agwakọta ntụ ọka).
Anyị ntụ ọka-egwe ọka ngwọta na-tumadi e mere dị ka American wheat na Australian ọcha siri wheat. Mgbe ị na-egwe ọka n'otu ụdị ọka wit, ntụ ọka mwepụ ntụ ọka bụ 76-79%, ebe ntụ ntụ bụ 0,54-0.62%. Ọ bụrụ na imepụta ụdị ntụ ọka abụọ, ntụ ọka ntụ ọka na ntụ ntụ ga-abụ 45-50% na 0.42-0.54% maka F1 na 25-28% na 0.62-0.65% maka F2. Kpọmkwem, ngụkọta oge ahụ dabere na ihe akọrọ. Ike oriri maka mmepụta nke otu ntụ ntụ abụghị ihe karịrị 65KWh na ọnọdụ nkịtị.
Ngwakọta ntụ ọka
Nke mbụ, a na-eziga ụdị dị iche na akara ntụ ọka dị iche iche emere n'ime ime igwe ahụ na bins ebe nchekwa dị iche iche site na ibute ngwa maka nchekwa.
A na-ejikarị ya eme ihe n'ugbo, igwe nri, ụlọ ahịa ọka na ụlọ ọrụ nhazi ọka ndị ọzọ.
A na-eji ya ewepu adịghị ọcha dị ka igbogbo ọka, uzuzu na ndị ọzọ, adịghị ọcha dị ka aja, obere ahịhịa mkpuru osisi, obere mkpụrụ chipped na obere ntụpọ dịka ahịhịa, osisi, okwute, wdg.
TQSF usoro ike ndọda destiner maka ọka ihicha, Iji wepu okwute, Ikesa ọka, Iwepu adịghị ọcha na na.
Nke a dị elu nkewa nkewa nkewa, ya na ọchichọ ọchịchọ ma ọ bụ usoro ochicho na-ejikarị eme ihe na igwe na ntụ ọka.
A na-ejikarị ụgbọelu rotary eme ihe maka nhicha ma ọ bụ grading ngwaọrụ na igwe, nri, osikapa igwe, ụlọ ọrụ kemịkal na ụlọ ọrụ mmanụ. Site na dochie anya meshes dị iche iche, ọ nwere ike ihicha adịghị ọcha na ọka wit, ọka, osikapa, mkpụrụ mmanụ na ihe ndị ọzọ.
Ihuenyo ahụ sara mbara ma na-asọpụta buru ibu, nhicha nhicha dị elu, ntụgharị ntụgharị dị larịị kwụsiri ike na obere mkpọtụ. Ejiri ọwa mmiri na-achọ ihe, ọ na-arụ ọrụ na gburugburu dị ọcha.
TCXT Series tubular Igwe Ọdụdọ
TCXT Series tubular Igwe Ọdụdọ maka ọka ihicha, Iji wepu nchara adịghị ọcha.
Ihe ndọta nke igwe ndọta anyị tụkwasịrị obi bụ nke arụ ọrụ dị elu magnetik na-adịkarị ala. Ya mere, akụrụngwa a bụ igwe na-ewepu igwe maka ụlọ ọrụ dịka nri, ọgwụ, eletrọniki, seramiiki, kemịkalụ, wdg.
Etinye High Pressure Jet Myọcha
A na-eji akụrụngwa a n'elu silo maka iwepụ ájá na obere ikuku ikuku otu ntụ ntụ mwepụ.Ọ na-ejikarị ya eme ihe na ntụ ọka, ụlọ nkwakọba ihe na ebe a na-edozi ọka.
TSYZ Ọka Nrụ Ọkụ
Ngwongwo ntụ ọka-TSYZ Series mgbali dampener na-arụ ọrụ dị mkpa na nhazi usoro mmiri ọka wit n'oge a na-ekpocha ọka wit na igwe ọka.